१५ करोड क्लबका पूर्वसर्त : ‘कबड्डी ३’ को डबल–डिजिट यात्रा
निफमा ‘बर्दिया सुन्दरी’ प्रिमियर
दिवंगत भट्टराई परिवारलाई आमाको लाख सहयोग
फिल्मलाई फिल्मबाटै खतरा : नीर शाह
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ ट्रेलर : जान्नूस कथावस्तु
‘प्यारासाइट’ निर्देशकलाई नेपालको बधाइ !
‘धुलो’ गीत इन्टरनेट रिलिज : प्रदर्शन मिति– सिनोप्सीससहित
‘प्यारासाइट’ले जित्यो अस्कर, एसियाली उदयको सुरुआत
ओपनिङ अकुपेन्सी : एकलमा ‘साङ्लो’, मल्टिप्लेक्समा ‘सेल्फी किङ’
फिल्म समिक्षा : सेल्फी किङ
16th February 20200तन्नेरीलाई राजेश हमालको टिप्स : उत्पादनशिल बन्नूस
16th February 20200निफमा ‘बर्दिया सुन्दरी’ प्रिमियर
16th February 20200दिवंगत भट्टराई परिवारलाई आमाको लाख सहयोग
By soniya on	 1st October 2019 Highlights, नेपाली, समाचार
‘कबड्डी’को तेस्रो श्रृंखलाले दोहोरो अंकको कमाइ गरेको छ । ‘छक्का पञ्जा २’पछि कुनै नेपाली फिल्मको डबल डिजिट सम्भव भएको हो । दस दिनमै १० करोड ग्रस कमाएर ‘कबड्डी ३’ले १५ करोड क्लब प्रवेशको संकेत दिएको छ । के यो सम्भव छ ?
यसका केही पूर्वसर्त छन् । भारतीय फिल्म ‘वार’ बुधबारदेखि रिलिज हुनेछ । ‘छ माया छपक्कै’ २४ गतेदेखि रिलिज हुनेछ । ‘वार’ र ‘छ माया छपक्कै’को प्रर्फमेन्समा ‘कबड्डी ३’ को आगामी कमाइको अनुपात धेरै हदसम्म निर्भर हुनेछ । प्रायः एक्सन फिल्मको लम्बाइ छोटो हुने भएकाले ‘कबड्डी’लाई फाइदा पुग्न सक्छ ।
पर्वको बेला दर्शकको लागि विकल्पहरु प्रशस्त हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुको रोजाइमा चलेको फिल्म पर्छ । सुरुआती दिनमा धेरै ‘कबड्डी ३’ हेरेपनि नहेरेका अझै छन् । जसको प्रभाव यसको व्यापारमा पर्न सक्छ । ‘छ माया छपक्कै’को पर्फमेन्ससँग सीधा ‘कबड्डी ३’ को व्यापार जोडिएको छ ।
इतिहास हेरौं : गतवर्ष ‘छक्का पञ्जा ३’ले एक महिनै हलमा आफूलाई राख्यो । सुरुआती साता कमजोर देखिएको अकुपेन्सी पर्व सुरु भएसँगै पुनः उकालो लाग्यो । इतिहासको यो पुनरावृत्ति यसपटक पनि हुनसक्छ । किनभने ‘कबड्डी ३’ को सोज धेरै घटेको पनि छैन ।